Koorsooyinka xirfada iyo isu diyaarinta waxbarasho waa koorso jiheyn Hadefka koorsadan waa inaad go’aansato laba xirfadood oo macquul ah oo aad doonaysid inaad ku dadaasho. Waa inaad xitaa gaartay qorshe cad dhanka sida aad u gaadhi doontid hadefkaaga.
Koorsadan waxay ku bilaabantaa wadahadal hordhac ah, kaas oo adigu aad si wadajir ah qof shaqaalaha ah ula qorshaynaysid nuxurka iyo qaabka iyadoo ku salaysan waxa aad u baahantahay si aad u samayso doorasho waxbarasho iyo xirfad ah macquul.
Nuxurkan wuxuu ahaan karaa tusaale ahaan:
macluumaad ku saabsan suuqa shaqada iyo xirfadaha kala duwan
macluumaad ku saabsan waxbarashada iyo sida aad isu masruufi karto xilliga wakhtiga waxbarasho
booqasho waxbarasho oo lagu tago iskoolada kala duwan si loo soo arko sida ay tahay in wax laga barto waxbarashada dadka waaweyn, ulliyadaha dadka waaweyn ee shacbiga, jaamicad ama la tago waxbarashada suuqa shaqada
booqasho waxbarasho ama tababar kooban oo goobo shaqo si aad ula qabsato xirfadaha kala duwan oo aad u awoodo inaad u samayso doorasho xirfad oo macquul ah oo la taaban karo.
wadahadal shakhsiyan ah oo waxbarasho iyo hagida dhanka xirfada oo la yeesho toddobaad dhaaf si laguugu taageero inaad samayso doorasho xirfad iyo waxbarasho oo la taaban karo.
Koorsooyinka xirfada iyo isu diyaarinta waxbarasho waxay khuseeyaan adigaaga:
Xafiiska Shaqada ka diiwaan-gashan shaqo-raadiye ahaan
aan haysan waxbarasho xirfadeed iyo jiheyn xirfad oo cad ama u baahan inaad baddasho jihadaada xirfada
u baahan hagida waxbarasho iyo jiheynta xirfad si aad u awoodo inaad samayso doorasho waxbarasho iyo xirfad oo si fiican looga fikiray.
Waxaa jira fursado ah in la helo taageero dhanka luuqada ah oo nuxurkeeda loo qaabeeyay Iswiidhish fudud looguna talogalay adigaaga u baahan arrintaas.
Koorsooyinka xirfada iyo isu diyaarinta waxbarasho waxaa bixiya shirkado waxbarasho oo kala duwan kuna yaala dalka oo dhan, anaga ayaa hawshaas u xil-saarna. Nala soo xiriir haddii aad u malaynayso inaad u baahantahay hagitaan qoto dheer si aad u awoodo samaynta doorashadaada xirfad iyo waxbarasho. Halkan ayaad ka arki kartaa degmooyinka laga helo koorsooyinka xirfada iyo isu diyaarinta waxbarasho.
Raadi koorsooyinka xirfada iyo isu diyaarinta waxbarasho
Koorsada hagitaanka looguna talogalay adigaaga ka yar 25 sano
Degmooyinka qaarkood waxaa laga helaa jiheyn gaar ah dhanka koorsooyinka xirfada iyo isu diyaarinta waxbarasho oo ku haboon adigaaga ka yar 25 sano. Taas waxaa lagu magacaabaa YSM UNG. Nuxurku wuxuu ku haboonyahay adigaaga ah dhalinyaro ee ku cusub suuqa shaqada. Waxaad ka qaybqaadanaysaa koox ka kooban dad aad isku da’ tihiin. Nala soo xiriir haddii aad u malaynayso in YSM UNG ay adiga kugu haboontahay. Halkan waxaad ka arki kartaa degmooyinka laga helo koorsadan.
Raadi YSM UNG